Ugu Weyn Ee Greenhouse
Waxaan ka dhigi karnaa kuleyliyo laga bilaabo arsyada leh alaabo daboolan
Inta badan milkiilayaasha dhulku waxay rabaan inay aasaasaan aqalka dhirta lagu koriyo. Xaaladaha intooda badan, waxay doorashadooda u istaagaan qaab dhismeedka qotodheer oo leh alaabo daboolan. Waxaa lagu rakibi karaa dhul furan ama koriyo. Qalabka daboolka ah waa sahal in la badalo (haddii ay lagama maarmaan tahay), qaabkuna waa muddo dheer. Waa la samayn karaa si madaxbannaan.
Sida loo doorto qalabka wax lagu daboolo sariiraha
Dadka degaanka xagaaga ee xirfadleyda ah, iyo sidoo kale kuwa bilawga ah ee ganacsigan, waxay u badan tahay in ay ogaadaan sida ay u adagtahay in la daryeelo beerta. Boogaha, qorraxda iyo cudurrada kala duwan ayaa dila qayb ballaadhan oo dalagga mustaqbalka ah, sidaas darteed arinta ilaalinta waxay noqoneysaa mid sii kordheysa. Tusaale ahaan, miyaad taqaan sida loo daboolo sariiraha si looga ilaaliyo saameynta xun ee deegaanka?
Nidaamka Autowatering: sida loo abaabulo waraabka faya-qabsiga oo si toos ah
Dhirta laysku qurxiyo iyo ubaxyo dhalaalaya ayaa u baahan fiiro gaar ah iyo daryeel. Wakhti ka dib, waraabinta caadiga ahi waxay noqoneysaa waajibaad adag. Si aad si dhaqso ah u waraabiso waraabka, aad u cad oo fudud marka la eego kulamada iyo hawlgalka. Miyay tahay inaan siinno nooca waraabka noocan ah, tixgelin hoose.
Ma jirto jawaabo aad u sarreysa oo ku saabsan su'aasha ah filimka uu ku fiican yahay isticmaalka aqalka dhirta lagu koriyo - nooc kasta ha ahaatee wuxuu leeyahay awoodiisa iyo daciifnimadiisa. Goorta la go'aamiyo filimka lagu dooranayo aqalka dhirta lagu koriyo, beeralayda badan ayaa lagu hagaa kharashka daboolida. Iyo qiimaha ay, waxay ku xiran tahay in ay tahay filim halis ah oo loogu talagalay beeraha lagu koriyo ama aan ahayn, iyo sifooyinka tayada iyo farsamada ee maaddada.
Suuqa shidaalka ee aqalka dhirta: sababta iyo sida loo qariyo aqalka dhirta lagu koriyo
Inta lagu jiro xilliga isbeddelka cimilada, isbedelka jiilaalka oo baraf yar yar iyo gaaban, oo ku dhajinaya jarida iyo gurka ayaa si cad loo arkay. Tani waxay saamayn ku yeelanaysaa goosashada mustaqbalka. Sidaa daraadeed, curinta shidaalka shidaalku wuxuu ahaa horumar cusub oo lagu xaliyo dhibaatada. Booqashada shinbiraha shimbashada ee lagu koriyo (greenhouses) Goobaha gudaha iyo kuwa shisheeye waxay soo saaraan noocyo waaweyn oo shabakadaha shimbiraha qorraxda.
Kala shaqeynta ka samaynta geedo-dabiiciga ah ee phytophthora polycarbonate
Phytophthora waa erey cabsi leh ee Fiisooyinka, bannaanka iyo beerta. Tani waa cudur aad u khatar ah oo saameeya habeenkii iyo qaar ka mid ah dhirta kale, sida strawberries ama qajaarka. Sida caadiga ah, dhirta ay ku dhacaan dabaysha goor dambe maaha kuwo la daweyn karo, sida kaliya ee looga baxayo waa in la burburiyo.
Sida loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo oo saqafka furan leh gacmahaaga
Bannaanka iyo beeralayda badan ayaa ka fikiray dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo oo ku yaal goobta. Dhismahan fudud ee noocan oo kale ah ayaa kaa caawin doona inuu koro geedo ku yaal gobollada qaboobaha, cagaarka miiska saaran yahay sanadka oo dhan, ama, iibso khudradda ama miraha yar yar ee xilliga qaboobaha. Qiimeeynta kharashka dhirta lagu dhammeeyaa ee dukaamada, rabitaanka iibsashada isla markiiba way baaba'aysaa, si kastaba ha ahaatee, haddii aad jeceshahay inaad wax walba sameyso oo aad haysato waqti ku filan, markaa waxaad dhisi kartaa aqalka dhirta lagu koriyo oo aad iskuxiran tahay.
Greenhouse "Yaanyo Saxiix": Kulanka gacmahooda
Qof kasta oo ka badan ama ka yar oo la xidhiidha beerashada khudradda ayaa ogtahay in geedka kasta uu bilaabo inuu korayo si ka wanaagsan oo dhakhso ah dhulka dhulka lagu ilaaliyo, halkaasoo laga ilaalin doono dabaysha, roobabka, iyo heerkulka hooseeya. Next, waxaan tixgelinaynaa aqalka dhirta "Signor yaan" ka soo saaraha LLC "Krovstroy" Dedovsk. Tilmaamo farsamo iyo qalabka aqalka dhirta lagu koriyo "Greenhouse of PVC" Saxiix Tomato "waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro xaaladaha ugu wanaagsan ee dhirta, taas oo u oggolaan doonta in ay hesho dalag hore, dalagyo iyo geedo waaweyn.
Isticmaalka maqaar aan duubnayn oo daboolan bacda
Si dadaal walba loo maalgeliyo goosashada mustaqbalka maaha mid aan waxtar lahayn, dadka degaanka xagaaga iyo beeralayda ayaa raadinaya qalab si loo abuuro microclimate optimal. Badanaa, qalabyo kala duwan oo daboolan ayaa loo isticmaalaa ujeedadan, kuwaas oo si gaar ah loogu abuuray ujeedooyinkan. Iyada oo ay caawinayaan, waxaa jiri doona horumar firfircoon ee dhirta, taas oo dheeraad ah u horseedi doontaa goosashada munaasibka ah.
Sida loo sameeyo qulqulka kuleylka leh gacmahaaga
Maanta, bannaanka iyo bannaanka u badan yihiin ku qanacsan yihiin fududaanta iyo fududahay isticmaalka lagu koriyo. Geedo koray ubaxyada noocan oo kale ah, waxay muujinaysaa natiijooyin wanaagsan ee biqilka, koraya oo horumarinaya si ka wanaagsan. Intaa waxaa dheer, dhirta ayaa si fiican loogu habeeyey ka kooban ee ciidda, adag. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonnaa arsadaha u adeegaya saldhigga naqshadeynta: waxa qalabka loo isticmaali karo iyo sida loo dhiso baraf-yar-yar oo laga helo waxa gacanta ku jira.
Qalabka aqalka dhirta oo aan cidhiidhi ahayn: sida loo sameeyo dhismaha isboorti, filim iyo qoryo
Sida loo kobciyo oo goosato goosashada qani ku ah boggaaga iyo inaad naftaada u sameyso aqalka dhirta lagu koriyo qajaarka leh gacmahaaga - waxaad ka akhrisan kartaa maqaalkan, halkaas oo sawirada kala duwan ee la kala dooranayo loo soo bandhigo si cad (tusaale ahaan kuwa bilowga ah). Shuruudaha aqalka dhirta ee qajaarka Si aad u habayso shaqadaada marxaladaha oo aad ka sameysid aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad marka hore u baahan tahay inaad baratid dhammaan shuruudaha ah in mustaqbalka mustaqbalka ay tahay inay la kulmaan: Hawlaha ugu muhiimsan - kuleylka kulaylka.
Sida loo sameeyo aqalka dhirta lagu koriyo sida Mitlayder: nidaam, sawiro, xisaabin
Thanks to waxqabadkeeda, aqalka dhirta lagu koriyo sida ku xusan Mitlayder ayaa dhowaan ku guuleystay aqoonsi tiro badan oo ka mid ah beeralayda qudaarta ah waxayna sii wadaan inay sii wataan. Waxaa soo saaray khabiir ku takhasusay Ameerikaanka ah ee warshadaha khudradda, aqalka dhirta lagu koriyo ayaa loo magacaabay ka dib markii uu abuuray. Tobaneeyo sano, Meatlider ayaa ku hawlanaa daraasad guud oo ku saabsan geeddi-socodka beeraha.
Waxsoosaarka madaxbannaan ee "boorka" barkada "oo leh gacmahooda
Waxaa jira noocyo iyo noocyo kala duwan oo lagu koriyo. Mid ka mid ah noocyada mobile-ga ee lagu koriyo waa "glucose" Breadbox. Aynu eegno sida loo sameeyo "Breadbasket" gacmahaaga, iyada oo la adeegsanaayo sawirada, sidoo kale waxaad ogaataa faa'iidooyinka iyo khasaaraha noocan ah ee aqalka dhirta lagu koriyo. Qeexida iyo qaababka naqshadeynta "Breadbox" - aqalka dhirta lagu koriyo, oo loo isticmaalo geedo sii kordhaya, dalagyo xidid iyo caleemo hore.
Noocyada rakibidda aqalka dhirta lagu koriyo "balanbaalis" goobta
Xagaaga degmo kasta ugu yaraan hal mar waxay ka fikireen iibsashada aqalka dhirta lagu koriyo ama sameynta. Qalabka aqalka dhirta "ballfly" ayaa laga sameeyay polycarbonate maanta waa mid caan ah. Maqaalkeena waxaan ku sharxi doonaa sida qaabkani u abaabulo qaabkan si madaxbannaan, tixgeliyaan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada. Qeexida iyo qalabka Naqshadeynta aynu eegeyno waxay la mid tahay balastar, taas oo ah sababta ay u yeelatay magac noocaas ah.
Noocyada iyo astaamaha lagu koriyo warshadaha
Qalabka warshadaynta warshadaha waa beer loo yaqanno beerta dabka, i.e., dhisme ballaaran oo loogu talagalay inay bixiso shuruudaha lagama maarmaanka u ah geedaha sii kordhaya. Ujeedada iyo sifooyinka Isticmaal warshadaha warshadaha ee beeraha si ay u koraan dalagyo kala duwan iyo waxyaabo kale oo la mid ah xilliga aaney kori karin beeraha ama beeraha.
Noocyada rakibidda iyo isticmaalka "kuleylka" oo loo yaqaan "cookie sandwich" ee goobta
"Roodhadhka" kaas oo helaya caan uu yahay aqalka dhirta loo yaqaan "greenhouse", taas oo lagu kala gooyo qadarkeeda yaryar, sahlanaanta hawlgalka, iyo sahlanaanta rakibidda. Adigu waad isu-ururin kartaa haddii aad raacdo tilmaamaha sahlan. Qeexida iyo qalabka Cagaarka ayaa leh qiyaas yar oo waxaa loogu talagalay inuu koro marxaladaha hore ee geedo, cagaar iyo dalagyo xidid.
Sida loo sameeyo kabo lagu koriyo ah
Marar badan, bannaanka u soo baxaan baahida loo qabo in ay ku koraan dhirta lagu koriyo ama lagu koriyo. Meelaha waaweyni maahan mid aad u haboon, markaa waxaan ku talineynaa in aan ku baraarugno sida loo sameeyo aqalka dhirta kuleylka leh ee gacmahaaga iyo horumarinta sawirada sawirka. Qeexidda iyo qaabka naqshadaynta Xaaladda aan fiicneyn, qaabeynta qaab aad u badan waxay u egyihiin balastar, kaas oo ku fidiyey baalashiisa.
Qaababka ka mid ah kulamada iyo hawlgalka "aqalka dhirta"
Greenhouse "Kalkaalisada gabadha caqliga leh" ayaa ah midka ugu caansan ee warshadeynta warshadaha aqalka dhirta lagu nadiifiyo oo leh habka xawaaraha. Beeraley kasta ayaa lagu qancin karaa faa'iidada nidaamkan adoo ku dhejinaya "kalkaalisada" on his gaar ah. Astaamaha aqalka dhirta lagu koriyo, xulashada booska rakibidda, tilmaamaha faahfaahinta ee faahfaahsan, shuruucda shaqada - dhamaantood waxaad ka heli doontaa dib-u-eegidgan.
Sida loo isticmaalo iodine si loola dagaallamo faashadda goor dambe ee lagu koriyo
Iodine ee qalabka gargaarka degdegga ah ma aha oo keliya lagama maarmaanka u ah, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa daroogo lagama maarmaan u ah beertaada. Waxaa loo isticmaalaa daaweynta phytophthora iyo cudurrada kale, iyo weliba quudinta. Aynu ka hadalno waxtarka ay ku leedahay goobtaada iyo isticmaalka dagaalka lagaga hortagayo dabaylo goor dambe. Guryaha waxtarka leh ee beerta iyo beerta Waxaa jirey muddo dheer in ay codsanayaan quudinta iyo bacriminta dhirta laga beero si looga ilaaliyo cudurada, cayayaanka, si ay u kiciyaan koritaankooda iyo horumarkooda.
Talooyin iyo talooyin ku saabsan wax soo saarka madax-bannaan ee laga sameeyo caagagga caagga ah
Ku dhowaad wax beerta ka mid ah ayaa soo wajahday xaalad ay ahayd lagama maarmaan si dhakhso ah oo wax ku ool ah loo dhiso aqalka dhirta lagu koriyo xilliga qaboobaha, taas oo awoodi karta in ay dhirta ka ilaaliso saameynta waxyeellada leh. Maanta waxaa jira fursado dhowr ah oo ku saabsan sida loo dhisi karo dhismaha noocan ah iyo waxa loo baahan yahay taas. Laakiin dhismaha tuubooyinka PVC waxay ka duwan yihiin inta ka hartay macaamiisheeda iyo qiimaha yar.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Greenhouse 2020